वाह ! सामाजिक अभियन्ताहरु अनि नेपाली दूतावास Globe Nepal News Portal
अमेरिकी सरकारले २०१५ मा दिएको टिपीएस सुबिधाको म्याद आउदो जुन २४ मा सकिदैछ । अमेरिकन नेपालीहरुले पाइरहेको सुबिधा नबिकरण गराउन राजदुत आँफै अग्रसर भएर अमेरिकी सरकारसंग कुरा थाल्न लबिङ गर्नुपर्नेमा नेपाली समाजका अगुवा डेलिगेसन गएर पहिला राजदूतलाई अनुरोध गर्नुपर्ने,अनुरोध गरिएको कुराहरु सगर्ब फोटोसहित सामाजिक संजालमा हाल्नुपर्ने । बेपत्तासँग हाँस्न पो मन लाग्यो ।
हिजो अस्ति दूतावास जानु अघि राजदूतले के गर्दै थिए ? थाहा थिएन र झकझकाउनु पर्‍यो ?
अमेरिकन नेपाली नेताहरुले राजदूत नभेटे राजदूतले पहल नै गर्दैन थिए कि क्या हो ? अहिले उनले लबिङ गर्दै छन् रे । नेपालीहरुले नबिकरणको सुबिधा पाउने हो होइन त्यो भन्दा बढी चासो उनको लबिङ अनि दूतावास डेलिगेशन गएका व्यक्तिहरुको चर्चा सुन्न हेर्न पाएकोमा आभारी छु । २१ औं शताब्दीमा ईमेल लगायत बिभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स माध्यमबाट झकझकाउन सकिनेमा ,बथान नै दूतावास पुगेर बिन्ती चढाउने दिन पो आएछ ।
नेपाली समाजका अभियन्ताहरुको यहाँ सिधा प्रत्यक्ष संपर्क गर्न सकिने सिनेटरहरु,हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ सम्बन्धित निकायहरु छैन कि क्या हो ? छैनन् भने किन धेरै उफ्रनु ?
नेपाली दूतावासले चाहने हो भने टिपीएस सुबिधा लिएका नेपाली यति छन् । उनीहरुले सो सुबिधा लिएपछि यो यो फाईदा लिए ,नेपाल र उनीहरुको परिवारले यो फाइदा पाए । अब फेरि नबिकरणको आवश्यकता छ ,नबिकरण भए यो यो फाईदा पुग्छ भनेर पक्का ब्रिफिङ गर्ला । काम गरौं धेरै हल्ला गर्नु जरुरत छैन । परिणाम आएपछि हल्ला गरौंला । शुभकामना र बधाई सहित ।
Sudip Pant Samajik Sanjal